Soo dejisan Odnoklassniki 16.3.3 – Vessoft
Soo dejisan Odnoklassniki
Odnoklassniki – codsi ku xidhiidhiyaa shabakada bulshada ee caanka ah. software The awood in ay is dhaafsadaan fariimaha iyo files, u sameyso wicitaano lacag la’aan ah si ay saaxiibo, isgaadhsiin ee chat video, muusiko dhegayso jecel iwm Odnoklassniki kuu ogolaanayaa inaad si ay u booqdaan bogagga kale ee isticmaala, aragto macluumaadka iyaga ku saabsan oo qiimeyn ama faallo photos. In software ah waxaa jira kooxo badan oo ku saabsan mawduucyada kala duwan, kulan ka mid ah qaybaha iyo guulaha for waxqabadka ergooyinka qaar kala duwan. Sidoo kale Odnoklassniki ku wargeliyo ku saabsan farriimaha soo socda cusub iyo dhacdooyinka muhiimka ah ee la xidhiidha user ah. Odnoklassniki ku jira set oo ah qalab si ay u dejiyaan hab ka mid ah wargelinta iyo maaraynta files audio.
Exchange ee fariimaha qoraalka ah iyo files
Isgaarsiinta ee chat video
Dhageysiga music jecel
Upload Fast of photos si ay hawsha
wargelin Instant ah dhacdooyinka muhiimka ah
Odnoklassniki Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Viber 5.5.2.28
English, Українська, Deutsch, Русский... Tango 3.14.134034